Ungayinyanzela njani imbonakalo yomhlaba okanye ye-portrait kwii -apps ezinjenge-instagram kunye nezinye (i-android)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungayinyanzela njani imbonakalo yomhlaba okanye ye-portrait kwii -apps ezinjenge-Instagram kunye nezinye (i-Android)
Ukuba ungumsebenzisi we-Instagram, wena & apos mhlawumbi uqaphele ukuba iapps ihlala ikwimo yomzobo, ngaphandle kwesixhobo kunye neapos; yokuqhelaniswa kwescreen. Ewe i-Instagram kunye neapos ye-UI yenzelwe ngokukodwa ukuba isebenze kakuhle kwimowudi yokuma, kodwa kuthekani ukuba ngamanye amaxesha ufuna ukuyijonga kwimowudi yokuma komhlaba? Ewe, kukho ezinye ii -apps ze-Android ezinokunyanzela umxholo wakho we-apos ukuba uboniswe nakweyiphi na indawo, nangaliphi na ixesha. Ulawulo lokujikeleza luyile app.
Ulawulo lokujikeleza kulula ukuyisebenzisa kwaye inokukhutshelwa simahla kwiGoogle Play.
Khuphela uLawulo lokujikeleza apha
Emva kokufaka iapp kunye nokuyivula kwifowuni yakho, kuya kufuneka wenze ukuba 'Qalisa ukulawula ukujikeleza' - oku kuyimfuneko ukuze ube nolawulo kwiscreen sakho kunye neapos;
Vula ukuLawula ukujikeleza, khetha ujikelezo kumthunzi wakho wesaziso, vula ukuqala kwiBoot ukuba unqwenela '
Nje ukuba wenze into 'yokulawula ukujikeleza', uLawulo loJikelezo luya kufikeleleka kwifowuni yakho yebar, kwaye ibonisa uluhlu lwezinto onokuzikhetha (ezantsi) nangaliphi na ixesha.
Ukhetho luhlala lunyanzela isikrini sakho ukuba sibonise umxholo kwimowudi yokwakheka komhlaba, nokuba yeyiphi na usetyenziso oyisebenzisayo kunye nendlela osiphatha ngayo isixhobo sakho. Njengoko ubona kwisikrini sokugqibela esingentla, unokukhetha usetyenziso ukuba 'Qala ebhuthini' kwaye awuzukuyiphumeza ngalo lonke ixesha ufuna ukutshintsha ubume be-Instagram kunye nolunye usetyenziso.
I-Instagram ngoku ivulekile kwimowudi yokuma komhlaba
Unokunyanzela isikrini sakho ukuba sihlale sihlala kwimowudi yemizobo, kuya kufuneka ucofe ukhetho lwesithathu njengoko ubona kwisikrini:
Olu khetho luhlala lungagqibekanga xa usungula usetyenziso ngokwalo.
Xa ungasaludingi uLawulo loJikelezo ukuze uhlale kwindawo yakho yobume, kuya kufuneka ukhubaze inqaku 'lokuQala lokujikeleza ujikelezo'.
Ngenye indlela, ukuba ucinga ukuba uza kusebenzisa iapp rhoqo, ungashiya inqaku lenziwe, ngelixa uvumela ukhetho lokuQala kwi-boot (olubonwe ngasentla kumfanekiso wokuqala) -ngoko ke, uLawulo loJikelo luzakuvela ngokuzenzekelayo kwi ibha yomgangatho xa unyusa ifowuni yakho.
ucofa njani kwikhonkco
lg g5 vs samsung s7 umda
Ngaphantsi kwesiXhobo seFrame True True by JBL uphononongo
I-iPhone 7 ixabiseke ngakumbi kuGoogle kune-Apple xa kufikwa kurhwebo-ngaphakathi
Umdlalo kaGoogle Play uMculo weenyanga ezi-4 wesilingo sasimahla ubuyile, kodwa hayi wonke umntu
Eyona nto ithengiweyo yokuthenga & iiapos zeApple yewotshi yoHlobo lwe-6 yokujongana nenethiwekhi kwimirhumo yasimahla
I-Samsung Galaxy S6 kunye nomhla wokukhutshwa komda we-S6 kunye nesishwankathelo sexabiso
Uzuko lweGeek! Uthotho lwasekhaya olusekwe kwiBluetooth Star Trek Communicator luyafumaneka ngoku-odola kwangaphambili
I-LG Tone Infinim yeyona ntloko ye-Bluetooth ihlala ixesha elide, iza nezinto ezikhethekileyo ze-G3
I-5 simahla umphathi wegama eligqithisiweyo losetyenziso lwe-Android kunye ne-iOS ezigcina iikhowudi zakho kude notshaba